आज प्रधानन्यायाधीश जबराको अग्निपरीक्षा, के गर्लान् ? – Gandaki Voice
कोरोना खोप : एक व्यक्तिलाई दुई डोज
कहिले हुन्छ वर्षा ?
Home/राजनीति/आज प्रधानन्यायाधीश जबराको अग्निपरीक्षा, के गर्लान् ?
आज प्रधानन्यायाधीश जबराको अग्निपरीक्षा, के गर्लान् ?
पोखरा, ८ पुस ।
बहुचर्चित संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाइ आज बुधबारका लागि तय भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयसमेत विपक्ष बनाएर दायर भएका रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्ने भएको हो ।
संसद विघटन ‘असंवैधानिक’ भएको दाबी सर्वोच्चमा एक दर्जन रिट दायर भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख २७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन उक्त सिफारिसलाई सदर गर्दै संसद् विघटन भएको घोषणा गरेकी थिइन् ।
योसंगै आज दिन र विरलै हुने यस्ता घटनाले प्रधानन्यायाधीश जबराको अग्निपरीक्षा भन्ने धेरैको बझाइ छ । अधिकांशले सर्वोच्चले सही निर्णय गरेर देशलाई निकाश दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । अब प्रधानन्यायाधीशले के गर्लान् त्यो हेर्न बाँकी छ ।
मुख्यमन्त्री राईको मन : दुर्घटनाको दर्दनाक दृश्य देखे, वास्ता नगरी हिंडे
प्रचण्ड बने दलको नेता